Photography, Surrealism ary Robert & Shana Parkeharrison | Famoronana an-tserasera
Omaly nihaona tamin'ny sary surreal nalain'i Michal Bieganski amin'ity fikarohana ity ho an'ny tenany amin'ny toerana sy ala hafahafa izay mifangaro ny fitaratra rehefa mijery ny asany iray ny mpijery.
Androany dia miverina amin'ny zoma izao isika amin'ny zava-misy azo antoka amin'ny sary amin'ny alàlan'i Robert & Shana Parkeharrison. Satria izy ireo ihany no maneho hevitra avy amin'ny tranokalany, dia mamorona asa izy ireo ho setrin'ny fifandraisan'ny olombelona, ​​ny teknolojia ary ny natiora. Azontsika jerena izany amin'ny sangan'asany izay misy fitantarana tsy mazava manolotra ny fahitany amin'ny olana amin'ny fifangaroana eo amin'ny filan'ny olombelona indrindra sy ireo izay mankany amin'ny fanavaozana sy ny haitao.
"Logic of Spring" dia a sary manaitra ary izany dia misarika ny sain'ny mpijery. Amin'ity vanim-potoana ity rehefa hanitsaka ireo voninkazo ireo isika ary hahita ny fiovan'ny tonony eo amin'ny faravodilanitra sy ny sary, Robert sy Shana dia mitondra antsika ny dingana voalohany amin'ny lohataona amin'ny fomba fijerin'izy ireo manokana.
Miaraka amin'ny fitaovana mekanika sy ireo masomboly navoakany, voahodidin'ny lolo, ilay mazoto amin'ity sary ity hamboly ny tany manitsaka amin'ny angovo ampy ahafahantsika mivoaka avy amin'ny paozy nampiasaina tamin'ny fisamborana. Sary iray izay tena mifanitsy amin'ny maro hafa izay mety ho hitanao amin'ity mpivady ity izay maniry fatratra amin'ny surrealism.
Miankina amin'ny fijerin'ny mpijery ny habetsaky ny tsy fahazoana miaina amin'ny sehatra hafahafa sy singa voajanahary. Eny miavaka koa izany kalitao amin'ny sary toy ny tranga misy amin'ireo sary an-tsary rehetra hitanao tao amin'ny tranokalany, ny rohy eto.
Fanangonana izay mitady ihany koa tononkalo amin'ny anarana iraisana ary ireo loko pastel misy feo malefaka ireo. Mpivady izay mifanome tanana mahita ny vinavinany kanto sy ilay tsy fahazoana miaina mipetraka ao amin'izy roa tonta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'Logic of Spring' nataon'i Robert & Shana Parkeharrison